Ugu Fiican ee Ugu Fiican Rugta Weyn ee Marti Gelinta Sare ee King | Rayson
Soo-saareyaasha Qiimaha Xirfadlayaasha Soosaarayaasha Soosaarayaasha Qiimaha Sare ee Boqoradda
Soosaarayaasha joodariga dhexdhexaadka ah ee Shiinaha - Rayson
Ugu Fiican ee Ugu Fiican Rugta Weyn ee Marti Gelinta Sare ee King
Rayson ee Aagga Warshadaha Rayson, Wadada Huasha, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, Shiinaha. Alaabooyinka ugu waaweeyn ee ugu fiican ee raaxada leh ee Boqolleyda King Mathie Alaab bixiyaasha.
Firfircoonaanta Boqortooyada ee Xaddiga Dhaqaale ee raaxada leh Alaabada ayaa baahida weyn ka dhexeysa nolosha dadka iyo shaqada. Waxaa si aad ah loogu adeegsaday guryaha, ganacsiga iyo warshadaha.
Rayson waxaa lagu horumariyey tikniyoolajiyadda horumarsan. Waxaa loo qaabeeyey iyadoo la adeegsanayo CAD, oo laga been abuuray tikniyoolajiyadda CNC, isla markaana ay xukumayaan teknolojiyadda dareemayaasha. Raaxada Dhaqaalaha Boqolleyda Xamuul ee raaxada
Su'aalaha la isweydiiyo:
1.Ma waxaad leedahay shirkad ganacsi ama warshad?
Waxaan nahay warshad, waxaan ku takhasustay soosaarida joodariyada, dharka dhogorta lahayn iyo isha wax ka badan 10 sano.at isla waqtigaas, waxaan leenahay koox iibisa xirfadleyda oo wax ka qabta ganacsiga qaran.
2.Miyaad iga caawin kartaa inaan sameysto nashqadeynteena ama u adeegso sumadeyda sheyga?
Waxaan u sameyn karnaa joodariga iyadoo loo eegayo qaabeyntaada ama waxaan ku siin karnaa adeegga OEM kaliya waxaan u baahanahay inaad na siiso farshaxankaaga wax soo saarka ama sawirrada sumadda.
3.Sidee qaababka lacag bixinta aad aqbashaa?
LC at arag / by TT, 30% Deposi iyo 70% dheelitirka waxay ka soo horjeedaa nuqulada dukumiintiyada dhoofinta ah 7 maalmood maalmaha shaqada.
Wax muhiim ah waxaan u baahanahay inaan dhaho:
1.Maybe waa wax yar oo ka duwan waxa aad dhab ahaan rabto. Xaqiiqdii, qiyaasta qaar sida qaabka, qaabdhismeedka, dhererka iyo cabirka waa la diyaarin karaa.
2.Maxaa kugu wareersan tahay waxa ku habboon joodariga guga ee la iibin karo. Hagaag, Thanks to 10 sano oo waayo aragnimo ah, waxaan kusiineynaa xoogaa latalin xirfadeed ah.
3.Maamilaheena asaasiga ah ayaa kaa caawin doona inaad abuurto macaash badan.
4.Waxaan ku faraxsanahay inaan aqoontaada la wadaagno, kaliya nala hadal.
Rayson Global Co., Ltd waa iskaashi ganacsi oo Sino-US ah, oo la aasaasay 2007 kaasoo ku yaal Shishan Town, Foshan High-Tech Zone, waxaana lagu dejiyey meel u dhow shirkadaha waaweyn sida Volkswagen, Honda Auto iyo Chimei Innolux. Warshadda ayaa ah Qiyaastii 40 daqiiqo oo baabuur ayaa laga keenay Madaarka Caalamiga ah ee Guangzhou Baiyun iyo Hoolka Bandhigga Canton Fair.
Barkin xumbo celcelis ah oo jumlo gaabis ah ayaa dib loogu celiyaa oo lagu qaataa 'goodprice-Rayson'
Joodariga cusub ee cusub ee 'Rolled Euro Top' oo leh ilo
Isticmaalka labada dhinac ee ugu Fiican furaashka guga Joodariga FactoryPrice-Rayson